Kulamada guud ee golaha shacabka oo la hakiyay – Kalfadhi
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in la hakiyay kulamada guud Aqalka Hoose inta ka harsan bisha barakeysan ee Ramadan.
Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in ay sii socon doonan kulamada guddiyada golaha shacabka.
Dhinaca kale,Xildhibaannada golaha shacabka ayaa dib u dhiggay kulan su’aal weydiin ahaa oo uu maanta ka cudur daartay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan.
Xubno ka tirsan guddiga arrimaha bulshadda ee golaha shacabka ayaa ku dhaliilay wasaarada waxbarashada musuq maasuq iyo lacago la lunsaday.
Xildhibaannada golaha shacabka ayaa kulankooda ugu horreeya yeelan doona marka laga soo laabto safaxa ciidul Fidriga.
Wasiirka Waxbarashada oo hortagaya baarlamaanka